Soo degso Xidhmada Boeing KC-135 Stratotanker Xirmooyinka FSX & P3D - Rikoooo
downloads 14 010
Xirmooyin dhameystiran oo loogu talagalay FSX/ SP2 (tijaabiyey Rikoooo oo la jaan qaadaya Prepar3D v4.5) oo leh wejiga buuxa ee VC, iyo qolka kor u kaca. Lagu hagaajiyay isku-dhufadhe leh 'boom' animated animation, iyo muuqaallo kamarado loogu talagalay shidael ariel. Waxay ku jirtaa kororka caadiga ah ee shidaalka, kor u qaadida lifaaqa kororka, iyo nidaamka MPRS ee nooca R. Ku talinaynaa in lagu daro Qiyaasta-dib-u-warshadaynta Duulista-In-Flight for FSX by Andy Niko iyo Jivko Rusev diyaaradahaaga aad jeceshahay.
Boeing KC-135 Stratotanker waa diyaarad militari oo rakhiis ah. Waxay ahayd markabkii ugu horreeyay ee hawada qaada ee batroolka ee US Air Force oo beddelaya KC-97 Stratotanker. Sida walaalkeed, Boeing 707, KC-135 waxaa laga soo qaaday Boeing 367-80, oo loo yaqaan 'Dash-80'. Waxaa markii hore loo xilsaaray in ay dejiso weerarrada istiraatiijiyadaha ee istaraatiijiyada laakiin waxaa loo adeegsan jiray dagaal badan oo ka dhacay Woqooyiga Vietnam kadibna colaadaha sida Dagaalka Duufaanta ah si loo ballaariyo kala duwanaanta iyo adkaysiga Cimilada iyo Dagaalyahannada Diyaaradaha iyo Badda. Iyadoo loo adeegsanayo Ciidanka Cirka ee Maraykanka tan iyo Juun 1957, KC-135-da ugu dambeeyay waxaa loo wareejiyay Ciidamada Xoogga ee 1965.
Dhammaan KC-135 waxaa markii hore la qalabeeyey mashiinnada Pratt & Whitney J-57-P-59W. 1980s barnaamijka dib-u-habeyn ee ugu horreeya oo lagu daray maraakiibta 157 oo leh Pratt & Whitney TF-33-PW-102 turbofan engine. Bakhaarada wax laga beddelay, oo loo xilsaaray KC-135E, waxay ahayd 14% more shidaal ka waxtar badan KC-135A. Barnaamijka dib-u-habeeynta ayaa dib loo duubay diyaaradaha 500 oo leh CFM56 cusub. Bakhaarada wax laga beddelay, oo loo xilsaaray KC-135R (isbedelka KC-135A ama E) ama KC-135T (KC-135Q wax laga beddelay), waa 25% shidaal waxtar badan oo ka mida makiinadaha hore.
Author: Gary D. Shetter III
Boeing 727-200 leh 154 Liveries FSX & P3D